I-Apple ilurhoxisile uphuhliso lwemidlalo yeApple Arcade ukutshintsha indlela yayo | IPhone iindaba
U-Apple urhoxisile ukukhula kwemidlalo ye-Apple Arcade ukutshintsha ukujolisa kwayo
UIgnacio Sala | | IPhone imidlalo, Iimveliso ze-Apple
I-Apple Arcade yeqonga lika-Apple lokudlala elibetha kwimarike kulo nyaka uphelileyo. Okwangoku, iApple ayichazanga nangaliphi na ixesha kuhamba njani ukwamkelwa koku kuzinikela kutsha kwihlabathi leenkonzo, kodwa yonke into ibonakala ngathi ibonisa impumelelo, kunokuba kuncinci.
Ukusuka eBloomberg, kwakhona ngoMark Gurman, bathi UApple uzirhoxisile izivumelwano ebenazo nee studio ezithile yamagama evidiyo. Isizathu asikho enye ngaphandle kokutshintsha isicwangciso esele silandele ukuza kuthi ga ngoku, kuba efuna ukubambisa abasebenzisi ukuba badlale rhoqo.
E-Bloomberg bathi umvelisi oyilayo e-Apple Arcade uxelele abanye abaphuhlisi ukuba izihloko abasebenza kuzo babengenalo inqanaba lokuzinikela elifunwa ngu-Apple. I-Apple ifuna ukugcina umdla wabasebenzisi ukuze babone ngamehlo amahle behlawula umrhumo wenyanga kwaye bangasebenzisi kuphela ixesha lesilingo.
Ngokungagcini inqanaba lokuzibophelela kubasebenzisi abalindelwe yiApple kwizihloko ezikhoyo kwiqonga layo, inkampani irhoxisile ezinye zeekhontrakthi esele zisayinile, imema aba baphuhlisi ukuba qhubeka nokusebenzisana kwixesha elizayo.
Okwangoku, iApple yenza ukuba kufumaneke ngeApple Arcade, ngaphezulu kwamagama angama-120, uninzi lwayo luyimisebenzi yokwenene yobugcisa, kodwa wakuba uyisebenzisile, iyahlala, kuba ayifumani, kwiimeko ezininzi, uhlaziyo lwamaxesha ngamaxesha lokongeza umxholo omtsha, imixholo emitsha ...
1 Indlela engalunganga
4 Imiqulu yobhaliso
Ngobude njengokuba usazi, IApple Arcade yazalwa inendawo engachananga. Imidlalo ekhoyo kweliqonga inesiqalo kunye nesiphelo. Ngelixa kuyinyani ukuba ungazisebenzisa kwakhona, xa sithetha ngee-graphic adventures, umdla awusafani, kuba kukuphinda into enye kwakhona.
Nangona kunjalo, ukuba sithetha ngemidlalo ekhoyo ngaphandle kweqonga layo, njengePUBG Iselfowuni, umnxeba weDuty: Iselfowuni okanye iFortnite, izinto zitshintsha kakhulu, kuba ayisiyiyo kuphela izinto ezintsha zaziswa ngamaxesha athile Ukugcina umdla wabadlali, kodwa nayo yonke imidlalo yahluke ngokupheleleyo.
Kodwa ke, awungekhe ubonelele ngesihloko solu hlobo phantsi kobhaliso kuba aluzukuvuselela umdla wabasebenzisi nokuba. Owona mzekelo ukhulayo ufumaneka kwezinye izihloko zeNintendo, izihloko ezifuna ukubhaliselwa ngenyanga ukufumana okuninzi kuwo, umrhumo uninzi lwabasebenzisi olungazimiselanga ukuhlawula kwaye olunyanzele inkampani yaseJapan ukuba Cinga kwakhona ukwazisa kwakho okulandelayo kwimarike yefoni.
Ukupapasha ividiyo ye-Apple yokusasaza, iApple TV +, inkampani ekhokelwa nguTim Cook inika umrhumo wonyaka omnye kubo bonke abasebenzisi abathenga isixhobo esitsha (i-iPhone, i-iPad, iMac). Okwangoku ikhathalogu ekhoyo ilinganiselwe kakhulu, kuba sinokufumana kuphela umxholo wokuqala, Akukho manqaku akudala okanye iimuvi, nangona amanye amarhe ebonisa ukuba iApple ifuna ukwandisa ikhathalogu malunga noku.
U-Apple akazange abhengeze inani labasebenzisi abahlawulayo iqonga elinalo kwaye xa ndisithi abasebenzisi abahlawulwayo, ndithetha ukuba abo bahlawula i-4,99 euro / iidola ngenyanga zibiza, hayi abo basebenzisa ithuba lonyaka wamahhala eniwunikayo.
Iindaba zeApple + yenye yeenkonzo ezithi, ngokwemithombo eyahlukeneyo, zingakhange zisuswe. Izolo iNew York Times, elinye lawona maphephandaba asasazwa kakhulu eMelika ibhengeze ukuba ililahlile eli qonga, ukususela awuyiphumelelanga injongo u-Apple akuqinisekise ngayo, eyayingeyonyani ngaphandle kokunyusa inani lababhalisi benyanga.
Isisombululo sabasebenzisi ukuba basibone ngamehlo amahle, ukunika olu hlobo lwenkonzo ithuba lokudlula bazihlanganise ngokwendlela yokubhalisa, ukuze ixabiso lilonke lokuhlawulela iinkonzo ezahlukeneyo lingaphantsi kunangoku elizimeleyo.
Iindaba zeApple, iApple Arcade kunye neApple TV + inokuba yipakethi enomdla eUnited States, eUnited Kingdom nase-Australia apho iApple News ifumaneka khona, kodwa hayi kwamanye amazwe apho inkonzo yeendaba yeApple khona. ayikafumaneki.
Nangona eyona pakethi inomdla inokuba njalo I-Apple TV +, iApple Music kunye neApple Arcade. Iindleko ezipheleleyo zezi nkonzo zintathu zii-euro ezingama-19,97, kodwa ukuba uzidibanisa kwipakethi kwaye unciphise amaxabiso, kunokwenzeka ngakumbi ukuba ngaphezulu kwesinye banokucinga kabini kwaye mhlawumbi bangayiqesha, nokuba banayo iApple Arcade. .
Ngokufanelekileyo, umsebenzisi angakhetha ipakethe yenkonzo ungathanda, nangona oku kungenakulindeleka ukuba kwenzeke. Kwiinyanga ezizayo, mhlawumbi kwigama eliphambili lokwazisa i-iPhone entsha, ecwangciselwe uSeptemba, ngethemba, siza kushiya amathandabuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » U-Apple urhoxisile ukukhula kwemidlalo ye-Apple Arcade ukutshintsha ukujolisa kwayo
Ukuveliswa kwe-iPhone 12 ngekwalibaziseka iinyanga ezi-1 okanye ezi-2 ngokweNikkei
INew York Times ibhengeza ukusuka kwiApple News